Dagaal maalintii 3aad ka socda degaano ku yaala duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Juhbada hoose
Dagaalo Qaraar oo maalintii 3aad galay ayaa saaka aroornimadii waxay dib uga qarxeen degaano ku yaala duleedka magaalada Kismaayo.
Dagaaladan ayaa dhexmaraya ciidamada maamulka Jubba oo gacan ka helaya kuwa AMISOM iyo xoogaga Al-shabaab.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka saaka uu bilowday markii xoogaga Al-shabaab ay weerar rogaal celis ah ku soo qaadeen degaanada Cabdalla-biroole iyo Buulo Xaaji oo dagaalkii shalay looga qabsaday.
Saraakiil ka tirsan maamulka Jubba ayaa sheegay in ciidamadooda ay dib uga soo baxeen degaanadii ay shalay ka qabsadeen Al-shabaab.
Daryanka rasaasta iyo madaafiicda ayaa laga maqlayaa degaanadaas iyadoo gurmadyo ciidan iyo saanad milateri ay gaarayaan labada dhinac kuwaasoo ka kala imanaya magaalada Kismaayo iyo degmada Jilib.
Ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalada saaka hase ahaatee ku dhowaad 50 qof oo labada dhinac u badan ayaa ku naf waayey dagaaladii dhacay labadii maalmood ee la soo dhaafay.
Maamulka KMG ah ee Jubba ayaa labo maalin ka hor sheegay iney bilaabeen howlgal milateri oo xoogaga Al-shabaab looga saarayo degaanada ku dhow magaalada Kismaayo ee gobolka J/hoose.